प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, केही पुरानै दोहोरिए, केही नयाँ, कार्यन्वयन हुनेमा आशंका| Yatra Daily
प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, केही पुरानै दोहोरिए, केही नयाँ, कार्यन्वयन हुनेमा आशंका
वीरगञ्ज, २७ जेठ । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहिवार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा केही पुराना कुरालाई यथावत राख्दै केहीलाई नया पनि थपिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, छात्रा तथा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते परिवारका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र राजविराजमा सीप विकास केन्द्र खोल्ने कामलाई अगाडि बढाइने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक जलाशय÷पोखरी निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गरिने तथा ‘संरक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन’ भन्ने मार्गदर्शनलाई साकार पार्न वन क्षेत्रको प्रदेशस्तरीय गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति सरकारले लिएको छ ।
बाराको पथलैया र सप्तरीको रुपनीमा ट्रमा अस्पताल सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ । स्मार्ट सवारी चालक पहिचान पत्र प्रदेशबाट नै वितरण गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम् सुख’ भन्ने नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा सडक किनारमा बिरुवा रोप्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । मुख्यमन्त्री हरित प्रदेश अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक एक करोड बिरुवा रोप्ने अभियानलाई व्यापीकरण गरिनेछ । वर, पीपल, समी, निमलगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्वका वनस्पतिहरु रोपिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
जनकपुरधाममा मधेश सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, वीरगञ्ज र जनकपुरधामको विकासका लागि दुवै ठाउँमा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । चालु आवमा खरीद गरिएको प्रदेश परिवहन बसलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्मका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सडकलाई मधेशी शहीद सडक घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बताउँदै आएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा समेटिएको छ ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्मको २५० किलोमिटर खण्डलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गर्ने सरकारले यस पटक पनि जनाएको छ । उक्त कार्यको अध्ययन कार्य प्रारम्भ भइसकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै संघीयता आन्दोलनका अगुवा स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह र गणतन्त्रवादी नेता स्व. रामराजाप्रसाद सिंहको शालिक निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा समेटिए पनि हालसम्म यो काम हुन सकेको छैन । शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक जनकपुरधाममा निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।